Voina mampihoron-koditra :: Lehilahy tapa-doha sy taovam-pananahana • AoRaha
Nampivarahon­tsana ny fahitana fatin-dehilahy iray tany Bekoratsaka Mampikony, tamin’ny marainan’ny sabotsy lasa teo. Tapaka ny lohany. Niala tamin’ny toerany ihany koa ny taovam-pananahany
ary nahitana ratra maro ny vatany. Nitanjaka tanteraka ny razana. Tsy nisy nahafantatra azy ny olona nijery ny razana. Tsy nisy fomba nahafantarana ny momba azy ihany koa teny aminy. Manodidina ny dimy amby efapolo taona ny fahitana an’ilay lehilahy.
Ahiana fatratra ho nisy namono io lehilahy io. Tany amin’ny toerana hafa no namonoana azy fa nariana teo amin’ny toerana malalaka misy bozaka.
Sambany ny fahitana olona nisy namono tamin’ny fomba mahatsiravina tahaka izao tany amin’ny distrikan’i Mampikony, araka ny namba­ran’ny loharanom-baovao. Nanaovana filazana tamin’ ny onjam-peo ny momba ity lehilahy hita faty ity ho an’ireo izay manana havana tsy hita.
Raha tsiahivina dia vao tsy ela akory, fa ny voalohan­dohan’ity volana desambra ity no nitrangana habibiana mampihoron-koditra tahaka izao koa tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy iny. Lehilahy sy vehivavy iray, tamina tanàna roa samy hafa, tany Ankazo­abo Atsimo no hita faty samy voatapa-doha. Ny vatan’izy ireo sisa no teo fa tsy hita ny lohan’izy ireo. Araka ny fantatra dia tsy mbola niseho tany amin’iny distrikan’ Ankazoabo Atsimo iny ny trangana vono olona tahaka izao, araka ny fampitam-baovao avy amin’ ny olona any an-toerana. Tany ambanivohitr’Ankazoabo no nisehoan’ireto trangana fahafatesana mampiahiahy ireto. Nifa­nelanelana ora vitsy ny fila­zana voarain’ny zandary momba ny fisian’ny olona tapa-doha hita faty. Tany
amin’ny toerana iray miala efapolo kilaometatra an’ Ankazoabo no nisy ny iray. Tany amin’ny dimy ambin’ ny folo kilaometatra miala eo an-tampon-tanàna kosa ny iray faharoa.
Efa eo am-pelan-tanan’ny Zandarimaria koa moa ny fanadihadiana rehetra mikasika io vono olona tany Ankazoabo io.
Herisetra ara-pananahana Lehilahy mpanotra voampanga ho nanolana ankizivavy
Loza teny Ambodimita Mpandeha môtô maty tsy tra-drano
Ambohimanambola Tovolahy roa nanafika mpivaro-kena
Fahamaizana magazay tetsy Behoririka :: Mitantara ny niainany ny afo sy setroka ireo nanatri-maso ny loza
Fanafihana mitam-piadiana :: Nosamborina ny lefitry kaomandin’ny Zandarimaria eny Sabotsy Namehana